▷ Ule akwụkwọ ntuziaka Lüften - 【 Comparison】 2022
Nyocha akwụkwọ ntuziaka Lüften
Kọmputa | 0 Comments
Onye isi ala - Oge 1
Amazon Prime Video (Video na-achọ); Omar Montes, Ivan Salcedo, Ángeles Montes (Ndị na-eme ihe nkiri)
Ịbụ na-arụsi ọrụ ike mgbe ị na-arụ ọrụ site n'ụlọ ma ọ bụ n'ọfịs bụ nnukwu mkpebi afọ ọhụrụ maka onye ọ bụla na-achọ ọkụ ụfọdụ n'ime akwụkwọ ekeresimesi ndị ahụ na otu n'ime ụzọ kachasị mma isi mee nke ahụ bụ na oche oche. Ịnọdụ n'oche na ilegide anya na ihuenyo kọmputa ụbọchị niile nwere ike inwe mmetụta na-adịghị mma na ahụike gị, nke mere na ọtụtụ ndị mmadụ na-atụgharị na tebụl guzoro iji nyere aka imebi ụbọchị ọrụ ha.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịkwalite na tebụl guzoro ọtọ, otu n'ime ihe mbụ ị ga-achọ ikpebi bụ ma ịchọrọ akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ oche eletrik. Ọ bụ ezie na enwere ike ibuli desktọpụ eletrịkị na-agbada site na ịpị bọtịnụ, ha nwekwara ike na-eme mkpọtụ na kwesịrị ịnọ nso ebe ọkụ eletrik mgbe eji ya. N'aka nke ọzọ, akwụkwọ ntuziaka na-eguzo ọtọ nwere ike ịbụ ngwọta zuru oke maka ndị na-achọ ime ka ihe dị mfe ma na-ekpochapụ eriri USB.
N'ịbụ nke dị na Grand Rapids, Michigan, Ụlọ Ọrụ Na-eguzo na-ere usoro ọkụ eletrik na nke pneumatic guzoro nke ndị ọkachamara na-emepụta ngwá ụlọ na Germany mere, nke sitere na ígwè nkwụsị kasị elu nke Switzerland, na aka wuru na Michigan. Taa, anyị ga-eleba anya n'ịdị mma ụlọ, usoro mgbakọ, atụmatụ na ịdị mfe nke ụlọ ọrụ Lüften Pneumatic Standing Desk iji nyere gị aka ikpebi ma nke a bụ ọkwa nkwalite ziri ezi maka ebe ọrụ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ. .
1 Nye ọnụahịa na nnweta
5 Asọmpi ahụ
6 Ikpe ikpeazụ
Nye ọnụahịa na nnweta
Lüften dị ozugbo site na desktọpụ guzoro maka € 765 n'oge edere. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ihe dị oke ọnụ na mbụ, buru n'uche na ụlọ ọrụ ahụ na-enye mbupu n'efu na akwụkwọ ikike afọ 5 ma ọ bụrụ na ị banye na nsogbu ọ bụla ma emesịa. Ị nwekwara ike ịzụta ntọala Lüften n'onwe gị maka € 515 ma ọ bụrụ na ị nwere tebụl ịchọrọ iji, yana ngwa njikwa eriri maka € 29.95. Desktọpụ guzoro na-ere ihe nkedo mkpọchi maka naanị € 8.95 maka ndị chọrọ ikike iweta oche a kwụ ọtọ n'ọfịs ma ọ bụ ebe ọrụ ha.
(Ebe E Si Nweta Foto: Avenir)
Site na mmalite, oche Lüften na-eguzobe onwe ya na-edobe onwe ya na desks akwụkwọ ntuziaka ndị ọzọ n'ihi na ọ dị ala na-ahụ anya nke na-eme ka oche ahụ dị ka ọ na-ese n'elu mmiri. Ọ bụ ezie na ọtụtụ tebụl guzoro eletrik nwere 'T' ma ọ bụ 'L' ụkwụ n'akụkụ nke ọ bụla, a na-etinye ụkwụ abụọ nke Lüften n'etiti na n'azụ oche.
Desktọpụ a na-esi na mkpụrụ osisi arụgharịrị arụgharị dị obosara nke ukwuu na obosara nke 60 sentimita, omimi nke inch 30, na ọkpụrụkpụ nke 1,25 sentimita asatọ. Desktọpụ kwụ ọtọ na-enye ọtụtụ ọrụ arụ ọrụ dị iche iche, gụnyere Dover White, Graphite Twill (Black), Neutral Twill (Light Grey), na Urban Oak. Enwekwara teepu Formica n'akụkụ akụkụ nke oche ahụ iji chebe ya ma n'oge mbupu na ojiji.
N'adịghị ka ndị ọzọ akwụkwọ ntuziaka guzo desks nke nwere a protruding crank ma ọ bụ aka iji mezie ịdị elu ha, Lüften si nwa aka bụ nnọọ akọ na-adịghị cluttered n'okpuru oche. Site na ịpị aka n'ebe ị nọ, ị nwere ike ibuli ma ọ bụ wetuo oche ahụ ma anyị chọpụtara na nkwupụta ụlọ ọrụ ahụ na "Lüften na-agbago na ala na 3 sekọnd" bụ eziokwu na ule anyị. Enwere ike wedata oche ahụ n'onwe ya na sentimita 27,75 ma ọ bụ welie ya na 45,25 sentimita asatọ, n'agbanyeghị na wiil nhọrọ na-agbakwunye 1,5 sentimita asatọ n'ịdị elu ya.
A na-eme ntọala nke Lüften nke Switzerland ntụ ntụ ntụ ntụ dị ka e kwuru n'elu ma dị ike. Ogidi ejima nke na-akwado oche na-ejikọta ya na ala nke isi na bolts ma ị nwekwara ike itinye wiil na ala nke isi. The Lüften base dị ọbụna na nwa, isi awọ ma ọ bụ na-acha ọcha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ dabara na agba nke tebụl gị, ọ bụ ezie na ị nwere ike ịhọrọ ụdị agba abụọ dịka anyị mere na isi ojii na mkpuchi ọcha.
Lüften bịara na igbe abụọ nwere otu igbe nwere oche na nke ọzọ nwere ogidi abụọ, isi, efere elu, eriri Boden, akwụkwọ ntuziaka, igodo Allen abụọ, na bolts na skru niile dị mkpa iji kpokọta oche ahụ.
Iji malite ikpokọta tebụl, ị ga-ebu ụzọ wepụ screws defit site na ogidi abụọ ahụ ma tinye ha n'ebe dị mma dịka ị ga-achọ ka ha gbochie ogidi ndị ahụ na-agbanwe n'oge njem. Site n'ebe ahụ, ịkwesịrị idobe efere dị n'elu na ogidi abụọ nwere skru asatọ dị larịị.
Ozugbo etinyere ogidi ndị ahụ na efere dị n'elu, ị ga-ejiri screwdriver Phillips chekwaa ya na desktọpụ. Mgbe ahụ, a ga-ejiri mgbanaka Allen mechie ntọala ya na kọlụm na skru asatọ.
Ebe nke a bụ oche kwụ ọtọ pneumatic, a na-etinye aka a na-eji ebuli na iwetu ya n'otu ogidi ndị nwere eriri Boden. Ekwesịrị ịkụnye aka ahụ n'ihu oche ahụ ma chekwaa eriri Boden n'okpuru tebụl site na iji obere eriri Boden enyere.
N'ozuzu, ịgbakọta Lüften abụghị ihe siri ike, n'agbanyeghị na ị ga-achọ onye ọzọ iji nyere gị aka ịtụgharị oche ahụ ozugbo ọ kwụsịrị n'ihi na isi ahụ dị arọ. N'iji ya tụnyere akwụkwọ ntuziaka ndị ọzọ na-eguzo ọtọ, usoro mgbakọ ahụ dị mfe karịa na Ergotron WorkFit-D, ma ọ dịghị mfe dị ka ikpokọta oche guzoro Vari.
Ozugbo anyị mechara gbakọta Lüften, anyị buru ụzọ nwalee ya na Chromebook, ọ bụ ezie na anyị gbakwunyekwara Dell 27 video conferencing monitor ka emechara, ebe desktọọpụ nwere ike ịkwado 40-50 pound.
Ebe ọ bụ na nke a bụ akwụkwọ ntuziaka na-eguzobe oche nke, iji bụrụ ihe ziri ezi, na-ele anya dị ka tebụl (n'ụzọ dị mma) karịa ụfọdụ n'ime tebụl ndị ọzọ anyị lere anya, anyị chere na ụdị nhazi a ga-adị mma maka oghere. Ekekọrịtara ọrụ na ụlọ ọrụ ebe ndị ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ ma ọ bụ na-agagharị ugboro ugboro. Na laptọọpụ na nyochaa na tebụl, anyị enweghị nsogbu ịhazigharị ịdị elu ya site na oche ruo n'ọnọdụ guzoro na enwere ọtụtụ ohere na tebụl maka nkwụnye laptọọpụ na ngwa ọkachamara bara uru.
Desktọpụ guzoro zigakwara LaComparacion Pro otu n'ime ngwa njikwa eriri ha nke anyị debere n'azụ oche ahụ. Otú ọ dị, n'adịghị ka eriri USB njikwa trays nke ndị ọzọ na-emepụta ngwá ụlọ na-enye, nke a dị ka eriri eriri ejiri na-echekwa eriri ndị na-esi na tebụl ruo n'ala. Nhazi ahụ dịkwa mma nke ukwuu na njikọ ya yiri vertebrae nke kọlụm azụ azụ.
Ọ bụ ezie na ọ zuru oke maka iji laptọọpụ na otu onye nleba anya, anyị kwụsịrị iji tray njikwa eriri USB a dị n'okpuru oche sitere na Amazon na ule nke abụọ anyị, bụ nke anyị nwere ike iji skru osisi chekwaa n'okpuru tebụl.
Maka ule agba nke abụọ anyị, anyị na-etinye obere PC desktọpụ na Lüften nwere ihe nleba anya zuru oke sitere na LG, kiiboodu igwe, yana Nest Hub. Ebe ọ bụ na anyị nwere ọtụtụ ngwaọrụ iji tinye, iji eriri njikwa eriri na-ekwe ka eriri ọkụ jiri oche na-agbago na ala na-enweghị anyị na-echegbu onwe anyị maka ịtọpụ ha. Ọbụlagodi na nnukwu ihuenyo na kọmpụta desktọpụ, Lüften ka nwere ike gbagoo na gbadata ngwa ngwa na tebụl ahụ nọgidere na-esi ike mgbe ejiri ya.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nhazi nke Lüften mana ịchọrọ oche oche eletrik kama oche akwụkwọ ntuziaka, Ụlọ Ọrụ Na-eguzo na-erekwa Ändern Electric, nke nwere kọlụm etiti kama abụọ maka € 702 n'oge ederede. . Agbanyeghị, ọ bụrụ na edobere obi gị na tebụl ntuziaka, Vari na Ergotron nwere abụọ anyị tụlere n'elu.
Oche oche Vari na-akwụ € 595 na, n'adịghị ka Lüften, elu na ụkwụ ya dị naanị n'otu agba, ọcha. Ọ bụ ezie na desktọpụ a enweghị nhọrọ nhazi, mgbakọ na-ekpo ọkụ na ihe niile ị ga-eme bụ ịgbakọta ụkwụ anọ niile ka emebere ụzọ ebuli elu nke Vari ma chekwaa ya n'okpuru oche ahụ. Ihe ọzọ gbakwunyere bụ na ihe nleba anya nke anyị nwalere wee jiri traị njikwa eriri arụnyere na azụ nke tebụl nke nwere oghere n'akụkụ ọ bụla maka ịkwọ ụgbọ mmiri. Ekwesiri iburu n'uche na n'ihi nhazi puru iche nke Vari Standing Desk, oche na-aputa nke ntakiri mgbe ewelitere.
Nhọrọ ọzọ dị oke ọnụ karịa Lüften kwesịrị ịtụle bụ Ergotron WorkFit-D Sit-Stand Desk. Desktọpụ a na-efu ihe dị ka € 900 ma ị ga-achọ onye na-ere ahịa ịzụta ya. WorkFit-D nwere lever n'akụkụ aka nri nke tebụl a na-eji ebuli na iwetu ya na tebụl a na-eji breeki arụnyere n'ime ya gbochie ya ịgbanye ma ọ bụ maa jijiji. N'agbanyeghị ọnụ ahịa ya dị elu, ị ga-achọkwa ịzụrụ traị njikwa USB dị iche ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye eriri ọkụ na tebụl gị.
Lüften bụ otu n'ime desks akwụkwọ ntuziaka pụrụ iche na ahịa taa. Nhazi ya na-ese n'elu mmiri nwere ike ịtụgharị isi na ụlọ ọrụ ma ọ bụ n'ụlọ, na isi ígwè siri ike na-enye oche ahụ mmetụta siri ike ọbụna na ogidi ndị dị n'etiti karịa n'akụkụ ọ bụla. Nnukwu ọrụ elu bụ ihe ọzọ gbakwunyere na wiil nhọrọ na-enye gị ntakịrị mgbanwe mgbe ị na-eji Lüften na nnukwu ohere.
Naanị ihe dị njọ na tebụl a bụ ọnụ ahịa dị elu, ma n'adịghị ka ndị na-emepụta ngwá ụlọ buru ibu, ngwaahịa niile nke The Standing Desk bụ ndị mmadụ atọ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ Grand Rapids nke ụlọ ọrụ na ihe niile ha na-arụ, ihe dị ka mmadụ 10 mejupụtara ya. . Ụlọ ọrụ ahụ na-ejikwa ihe dị elu dị elu ma na-enye mbupu n'efu yana akwụkwọ ikike afọ 5. Ọ bụrụ na ị na-achọ ka ịgbanwee gaa na akwụkwọ ntuziaka na-eguzo oche ma na-achọ ịkwado obere azụmahịa n'otu oge, Lüften nwere ike ịbụ maka gị.
Ịchọrọ ịkwalite nhazi ụlọ ọrụ ụlọ gị? Anyị na-ewetakwa oche kacha mma, oche kacha mma, na oche ụlọ ọrụ kacha mma.
Zipu ikwu Kagbuo azịza